ကမ္ဘာအံ့ဘွယ်ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ပျောက်ဆုံးတာ ၃၅ နှစ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့လေယာဉ် တစ် စင်း အောင် မြင် စွာ ဆင်း သက် | Burma Muslim
ကမ္ဘာအံ့ဘွယ်ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ပျောက်ဆုံးတာ ၃၅ နှစ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့လေယာဉ် တစ် စင်း အောင် မြင် စွာ ဆင်း သက်
ကမ္ဘာ အံ့ဘွယ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပျောက်ဆုံးတာ၃၅ နှစ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ လေယာဉ် တစ်စင်းအောင်မြင် ထိန်း ချူပ်ရေးတာဝါ ထူးဆန်းတဲ့ ဖြစ်ရပ် စတင် ကြုံ တွေ့ ရပါတယ်။
လူတွေရှာဖွေမှုလက်လျော့ ခဲ့ တဲ့ Douglas လေယာဉ်တစ်စင်းကိုတွေ့ မြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေဒါမှာဒီလေယာဉ်ပျံကိုမတွေ့ ရပါဘူး. လေဆိပ်
တာဝန်ခံတွေ က ဒါဟာဗင်နီဇွဲလားပါ။ မင်းတို့ ဘယ် ကနေပျံလာတာလဲ ဟုမေးရာ Captain pilot က Pan American Airways flight နံပါတ် 914 ပါ နယူးယောက် မြို့ ကနေ ဖလော်ရီဒါမြို့ ကို ပျံသန်းတဲ့ ခရီးစဉ် ကနေ မိုင် ၂၀၀၀ ကွာဝေး အောင် ပျံသန်းပြီး ဒီရောက်လာတာအံ့သြမိပါတယ်။ ပြီးတော့ ပျံသန်းမှု ခရီးစဉ် Record ကို ထုတ်ပြပါ တယ်..လေယာဉ်ဟာ 1955 ရလ ၂ရက်နေ့ ပျံတက်ခဲ့ ပါတယ် 35 ခြားခဲ့ ပြီ လေဆိတ်တာဝန်ခံတွေ စွာဆင်း သက်နိုင် ခဲ့ ပါတယ်။လေယာဉ်ပေါ်မှခရီး သည် အားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပါတယ်။ Time tunnel တစ်ကယ်ရှိပါသလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စား စရာပါပဲ။ Sinai Fake ကစ ကြာလာတွင်းမှာလူတွေရဲ့ သာမန်မျက် လုံးနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့အရာမြောက်မြားစွာ ရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်။
Time tunnel အပါဝင်ပေါ့ ။1990,9,9 ရက်နေ့ မှာတောင်အမေရိကတိုက် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ လေယာဉ်
ဟာအံ့သြ မှင်တက်ပြီး ဒါမ ဖြစ်နိုင်ဘူး မင်းတို့ ပုံပြင်ထွင်နေတာလာဆိုပြီး စုံစမ်းပါ တယ်….Flight နံပါတ် 914 ဟာ တစ်ကယ်ပဲ 1955,7,2 ဖလော်ရီဒါ သို့ပျံ သန်း နေ စဉ်ရုတ် တရက်ပျောက် ဆုံး သွား ပါတယ် ရှာဖွေပေမဲ့ ပြန်လည်တွေ့ ရှိခြင်းမရှိပါဘူး .လေယာဉ်ပေါ်မှခရီးသည် ၅၀ကျော် ကိုလည်း အသက် အာမခံ ကြေးပေးလျှော် ပြီးခဲ့ ပါပြီ ။.
ခရီးသည်တွေဟာသူတို့ အမေရိကန်ရှိနေအိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာသူတို့ အဖို့ ပိုပြီးအံ့သြသထက် အံ့သြမိ ပါတယ်သူတို့ ရဲ့ ခလေးတွေ မိသားစုတွေ က အို မင်း ကုန်ကြပေမဲ့ သူတို့ ဟာ အရင်လိုဘဲနုပျို ဆဲပါ။ရဲတွေနဲ့ သိပိပံပညာရှင်တွေ ကသူတို့ ရဲ့ ခန္တာကိုယ်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ ပြီးအတည်ပြုပေးခဲ့ ပါတယ်။ ။
Sai Sheng Hein